Jeep ကားအားပေးမှု မြင့်တက်နေဆဲ ဂျပန် ! – MyMedia Myanmar
Jeep ကားအားပေးမှု မြင့်တက်နေဆဲ ဂျပန် !
ဂျပန်နိုင်ငံ ဆိုတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် လောက်ကတည်းကစကာ Jeep Brand နဲ့ အတော်လေး အကျွမ်းတဝင် ရှိနေခဲ့ကြ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စစ်ပွဲ ပြဿနာတွေ အကြားမှာပဲ ဂျပန်စစ်သားတွေဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ စွန့်ပစ်ခံ Jeep ကားဟောင်းတစ်စီးကို မှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့ကာ Reverse-Engineered ပြုလုပ်ပြီး ပြန်လည်ဖန်တီးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို သမိုင်းကနေ ရလာတဲ့ ပထမဆုံးရလဒ်ကတော့ Toyota Land Cruiser အမျိုး အစားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ ခေတ်အထိတော့ Jeep တွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ အတွင်းမှာ လူကြိုက်များ ရေပန်းစားနေဆဲ ဖြစ်တာကြောင့် လာမယ့် ၃ နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာတင် Jeep ဟာဂျပန် ဈေးကွက်အတွင်း အတော်လေး ချဲ့ထွင် ရောင်းချ နိုင်ဖို့ အတွက် စီစဉ်နေပါပြီ။ Automotive News ရဲ့ အဆိုအရတော့ အခုလို လုပ်ငန်း ချဲ့ ထွင်မယ့် အစီအစဉ်ထဲမှာ ဆိုရင်လာမယ့် ၂၀၂၃ လောက် အထိမျှော်မှန်းထားကာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းက Dealership အသစ်ပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၀၀ လောက် အထိရှိမယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Jeep ရဲ့ Dealership ပေါင်း ၈၂ ခု ရှိနေပြီး လာမယ့် ၃ နှစ် အတွင်းမှာတင် Jeep ဟာ တစ်နှစ်ကို အစီးရေ ၂၀,၀၀၀ အထက် ရောင်းချ နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်က ရောင်းချရမှု အား ကတော့ အစီးရေ ၁၃,၅၈၈ အထိ ရှိခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးရဲ့ ရိုတ်ခတ်မှုက လွဲလို့ အခုလို ရောင်းအားရှိနေဆဲဟာ ဂျပန် မှာ ခုနစ် နှစ်မြောက် စံချိန်တင် ရောင်းချနေခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဂျပန် နိုင်ငံဟာ Jeep Wrangler အတွက် မြောက်အမေရိက ဈေးကွက် ပြင်ပမှာ အကြီးမားဆုံး ရောင်းချ ရတဲ့ ‌ဈေးကွက် အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် မိတ်ဆက် ခဲ့တဲ့ Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid ကားဆိုရင်လည်း Brand ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး မြှင့်တင် ပေးနိုင်မယ့် အနေအထား ထိကို မျှော်လင့်ထားနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ Jeep ကုမ္ပဏီဟာ ဂျပန်ဈေးကွက်အတွင်းက အားပေးတဲ့သူတွေရဲ့ အသံကိုလည်း အမြဲတမ်း ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးလေ့ရှိပြီး Discount တွေ မကြာခဏ ချ ပေးတာတွေ ၊ စက်ရုံကနေကို တစ်ပါတည်းပဲ နိုင်ငံ တွင်း လမ်းညွှန် စနစ်တွေကို ထည့်ပေး လိုက်တာ တွေ စသဖြင့် သီး သန့် ဝန်ဆောင်မှု တွေလည်း ဖန်တီး ပေးလေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အနည်းငယ် လောက်မှာပဲ Jeep ရဲ့ ရောင်း အားဟာ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရာမှာ အတော်လေးတိုးတက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အခြားသော အမေရိကကုမ္ပဏီ တွေက ကျဆင်း နေခဲ့ပေ မယ့် Jeep ကတော့ အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့တဲ့ အနေအထားပါပဲ။ ဂျပန် နိုင်ငံတွင်းမှာပဲ အခြားသော နာမည်ကြီး အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ General Motors ဆိုရင် Cadillac နဲ့ Chevrolet ဆိုပြီး Brand နှစ်မျိုးပဲရောင်းချနိုင်ခဲ့ကာ နောက်ပိုင်းမှာမှ Corvette နဲ့ Camaro ဆိုပြီး လိုက်လာ နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နာမည်ကြီး Ford ဆိုရင်လည်း ဂျပန် ဈေးကွက်ထဲမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် အနည်းငယ် လောက်ကတင်ပဲ ထွက် ခွာ သွားခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ FCA ( အခုတော့ Stellantis ) တို့ အနေနဲ့ ဂျပန် ဈေးကွက်ကို အတော်လေး အားစိုက်နေရ ခြင်း အကြောင်းရင်း တစ်ရပ်ရှိပါသေးတယ် ၊ အဲ့ဒါကတော့ Virtual Marketing စနစ်ကြောင့်ပါပဲ။
ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အနေနဲ့ အခုလို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးမဖြစ်ပေါ်လာခင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် လောက်ကတည်းကကို အခုလို အွန်လိုင်း နည်းပညာဘက်ကို ကူးပြောင်းခဲ့တာပါ။ မနှစ်ကဆိုရင် FCA ဂျပန် အနေနဲ့ Deferred Payment စနစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ငါးလ ဆက်တိုက် ပေးချေမှု ပြုလုပ်စရာမလိုပဲ နောက်ပိုင်းမှာလည်း Subsequent Repayment စနစ်နဲ့ သွားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးခဲ့တာပါ။ အခု လိုမျိုး ပိုက်ဆံ ချွေတာတဲ့ စနစ်မျိုးကို အမေရိကန်တွေ အတွက်က ရိုးနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဂျပန် အတွက်ကတော့ ယခင်တုန်းက ကြား တောင် မကြားခဲ့ဖူးပဲ အမှန်တကယ် မောင်းနှင် အသုံးပြုမှုပဲ နဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလေ့ရှိတာပါ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် Jeep ကတော့ FCA Japan ရဲ့ Hero Brand လို့တောင် ခေါ်ဆိုလို့ ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပြီး Fiat နဲ့ Alfa Romeo တို့ကိုတောင် အသာလေး ကျော်တက် သွားနိုင်တဲ့ အနေအထားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ လည်း Jeep ရဲ့ အကျိုး သက်ရောက်မှုနဲ့တင် FCA ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကို တင်ပို့ မယ့် သူတို့ရဲ့ ရှယ်ယာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ တုန်းက ၈.၁ ရာနှုန်းသာ ရှိခဲ့ရာကနေ မနှစ်က ၂၀၂၀ မှာတော့ ၉.၃ ရာခိုင်နှုန်း အထိကို တိုးမြှင့် နိုင်ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Jeep ကားအားပေးမှု မြင့်တက်နေဆဲ ဂျပန် ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-20T11:00:29+06:30January 20th, 2021|MYCARS MYANMAR|